EA039 - bokotra fiantsoana OMG Wireless Emergency Panic miaraka amin'ny bokotra azo ampiasaina ho an'ny trano / manokana (bokotra miantso 2 + mpandray 2) | Vahaolana OMG
[Tokony hanan-javatra】 Ho an'ny zokiolona, ​​na sembana, na marary hamandrika ny mpikarakara azy. Koa fanorana tsara ho mpitsabo, ny tonga lafatra valin'ny mahalala azo antoka, raha ny mpanjifa dia vonona tsy miandry ela loatra ny hiditra ny trano, na tsy manome azy ireo ny fotoana alohan'ny ampy mandondòna.
[Mahasoa ho an'ny fitondrana】 Ny fampitaovana dia azo ampiasaina tsara amin'ny tendany na entina ao anaty paosy. Ny fanindriana ny bokotra iray amin'ny fampitaovana dia hahatonga ilay mpandray feo hampandre feo mafy. Misy 52 voafantina voafantina hisafidy.
[Mora amin'ny fametrahana】 4 BOKY FAHA-haavon'ny (10-110db) handraisana henon'izy zaza sy ny hazavana. Ataovy mora foana ny fifantenana ny mozika sy ny mozika miaraka amin'ny bokotra 2 hita eo amin'ny sisin'ny receiver.
[Teknolojia mahazatra】 Adaptive Mampiasa teknolojia avo-matetika, manohitra ny fitsabahan'ny kokoa noho ny olon-tsotra Wireless rafitra fanairana ny 500ft / 150m ao amin'ny faritra misokatra, mafy fidirana sy ny faneva fahamarinan-toerana, dia afaka miditra vitsivitsy rindrina.
Famoronana maoderina sy kanto
Eo ho eo. Fivarotana 500 + dian-tongotra (faritra misokatra)
4 Ambaran'ny volombava
Ny fifandimbiasan'ny Receiver: 110-260V
Asa lava: 500ft Any amin'ny faritra malalaka.
FANAMARIHANA: Ny mpandidy dia mitaky bateria CR2032 izay efa tafiditra ary tsy azo alaina. Ny Mpisolo vava dia miditra amin'ny rindrina ary tsy mila batterie.
11486 Total Views 1 Views Today